नुनमा कसरी घुस्यो निजी क्षेत्र ? - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Jun 4, 2021 #आर्थिक, #समाजिक
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमार्फत नुन अयात र वितरण निजी क्षेत्रका लागि खुला गर्ने निर्णय गर्‍यो । बजेटको बुँदा नम्बर २२१ मा ‘आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय मूल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नुन उत्पादन तथा वितरण प्रतिस्पर्धी बनाइने’ भनिएको छ ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार आव ०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा साल्टलाई ‘प्रतिस्पर्धी बनाउने’ विषय उठेको थिएन । बजेटबारे अर्थमन्त्रालयमै भएको छलफलमा पनि यो विषय समावेश नभएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
उनले प्रतिस्पर्धाको बजारमा निजी क्षेत्रका जो पनि आउन सक्ने बताउँदै यो विषयमा आफूलाई लान्छित गर्ने दुष्प्रयास भएको बताए । ‘खुल्ला बजारमा मोतीलाल दुगड मात्रै भन्ने हुन्छ ? भारतमा सयौंथरि पाइन्छ । नेपालमा मात्र विरोध किन ?’, उनले भने, ‘मेराबारे अतिरञ्जित प्रचार गरियो । अब नुन उद्योग नै नचलाउने ?’